Gud cusub ee Bangiga Dhexe oo xilka la wareegay (AKHRISO) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gud cusub ee Bangiga Dhexe oo xilka la wareegay (AKHRISO)
Tuuryare 21 April 2019
Munaasabad Maanta lagu qabtay Magalada Muqdisho ayaa waxaa xilkii kula wareegay Guddoomiyaha Cusub ee Bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo dhawaan Golaha Wasiirada Soomaaliya ansixiyeen.
Gudodomiyihii hore ee Bangiga Dhexe ee waqtigiisa uu dhamaaday Bashiir Ciise Cali ayaa sirasmi ah xilka ugu wareejiyey Guddoomiyaha Cusub ee Bangiga Dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi.
Munaasabada waxaa goobjoog ka ahaa Wasiirka Wasaradad Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle,waxaana uu ugu hambalyeeyey Gudodomiyaha Bangiga dhexe xilka Cusub ee loo Magacaabey.
Sidoo kale Wasiir Beyle ayaa sheegay in ka Wasaarad ahaan ay si dhow ula Shaqeyn doonaan Guddoomiyaha Bangiga dhexe ee Soomaaliya,isaga oo u rajeeyey guul
Huge fire engulfs weapon warehouse in Somalia